မောင်ဥက္ကာနှင့် အပြောအဆို | ဥက္ကာကိုကို
Posted in: သရော်စာ, ဟာသများ, အက်ဆေး.	1 Comment
အမှောင်ရိပ်ထဲမှာ မောင်အုတ် ခပ်တည်တည်ရပ်နေ၏။
ဟိုးဝေးဝေးမှာ တက္ကစီတစ်စီးမောင်းလာတာ မြင်ရသည်။
“ငှင်… ဒါဆို ဘာလို့တားတုန်း´´
လီဗာဆောင့်နင်းပြီး လက်ခလယ်တစ်ချောင်း ကပိုကရိုထောင်ပြသွားသည်။
ခရေပင်ရိပ်တချို့မှာ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကို တွေ့ရသည်။
မောင်အုတ်ကို ကြည့်ပြီး မခို့တရို့လေးလုပ်ပြကြသည်။
မောင်အုတ်လည်း ခို့ခို့ရို့ရို့လေး ဖြစ်သွားရ၏။
စိတ်က မရိုးမရွဖြစ်လာသည်။ မနေနိုင်တော့။
ရှေ့နားက အပင်ရိပ်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် မှောင်ရိပ်ခိုနေသည်။
ကောင်မလေးက မူရာမာယာကလေးဖြင့် တစ်ဖက်လှည့်သွားသည်။
မောင်အုတ် အနားကို ထပ်တိုးသည်။
“ဟိုလေ… ဆန္ဒ.. ဆန္ဒရှိလားငှင်´´
ကောင်မလေး မထီတရီပြုံးပြီး မောင်အုတ်ဖက်လှည့်လာသည်။
“အင်း… ရှိတယ် ခစ်ခစ်….´´
“ဒါ… ဒါဆို … သိက္ခာနဲ့ ထိန်းလိုက်ပါညော်… လစ်ဘီ… ၀ှစ်´´
“ငှင်… သေနာကျ… ဖေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ်ကောင်… ဂီးးး´´
မောင်အုတ် သူငယ်ချင်းအိမ်ကို သွားလည်သည်။
အိမ်ရှေ့မှာ သူငယ်ချင်းအစ်မက ပန်းပင်ရေလောင်းနေ၏။
မောင်အုတ်ကို မြင်တော့ပြုံးပြသည်။ မောင်အုတ် မေးစမ်းကြည့်ရ၏။
မောင်အုတ် လက်နှစ်ဖက်ကို ဟိုလွှဲဒီလွှဲလုပ်နေတာကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းအစ်မက မျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်သည်။
“ဟိုလေ… ဟိုနင်း… အာသာ.. အာသာရှိလားငှင်´´
စီးထားသော ဖိနပ်နှင့် မောင်အုတ်နဖူးဆီတည့်တည့်ပစ်ပေါက်လိုက်သံဖြစ်သည်။
“အီး.. ဟီးဟီး… အစ်မရဲ့မောင်… အနော့်သယ်ရင်း.. အာသာအောင်ကြည် ရှိလားလို့ မေးဒါကို… ငွားးးး´´
“ညင်… မောင်လေး အာသာအောင်ကြည်လား…. တိပါပု… မေ့လို့… မေ့လုိ့… မွှားလို့ညော်… နာတွားလားငှင်´´
“နာဒယ်… နာဒယ်…. ထော်ဝူး… ငွားးးး´´
နောက်ပိုင်းကျရင် စကားပြောဆင်ခြင်ရန် မောင်အုတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
– ဥက္ကာကိုကို –
← ““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း”” (စတုတ္ထပိုင်း)
ညတစ်ညကို ဖြတ်သန်းခြင်း →
One comment on “မောင်ဥက္ကာနှင့် အပြောအဆို”
ဝေလ on March 24, 2016 at 8:55 am said: